Ahoana ny fametrahana ny rahona amin'ny Chef Automate sy ny AWS
Manompoa ny rahona amin'ny Chef Automate sy ny AWS
Chef & AWS: Fikambanana tena ilaina
Chef Automate ho tombontsoan'ny maso
Manitatra ny fifandraisanao amin'ny AWS
Ny herin'ny orinasa Chef sy ny vondron'olona misokatra
AWS OpsWorks ho an'ny Chef Automate dia fifanakalozan-tserasera mivantana eo amin'ny Amazon Web Services sy Chief Software, Inc. Izany dia midika fa mifantoka amin'ny firoboroboanao miaraka amin'ity fitantanana ity ireo fikambanana roa ireo. Faly izahay mpiray tsikombakomba ary niasa tamim-pahavitrihana izahay mba hampiseho aminareo ny tsara indrindra amin'ny zavatra raisinay tsirairay avy eo amin'ny latabatra. Hanohy hiara-hiasa mafy ary afaka miankina amin'ny fandinihana ity fanatitra ity dia hitohy hatrany amin'ny fijerin'ny tsikera mpanjifa. Mpisava lalana roa no niara-niasa mba hiantohana fa efa vonona ianao (araka ny efa voalazantsika hatramin'ny voalohany) "mitantana ny rahona".
At lohany, dia mahita lamina iray miaraka amin'ireo mpanjifantsika lehibe indrindra isika. Hatramin'ny nanovanay ny fiarahan'izy ireo tamin'ny fanampiana azy ireo handefa fehezan-dalàna haingana kokoa, azo antoka kokoa ary ho azo antoka kokoa, Chef Automate dia lasa fitantanana fototra ho an'ny misiona. Tahaka ny fitantanan-draharaha misahana ny fitantanana rehetra, miantoka ny fahazoana sy ny fahatokisana ny fampahalalam-baovao dia mitaky angovo, angovo ary ny harena. Ny mpanjifa Fortune 500 dia mila mandany ny fototra fototra sy ny dingana fitantanana ny fampiharana ny fitantanana.
Ny AWS OpsWorks ho an'ny Chef Automate dia manome lanja mitovy amin'ny fahombiazany, ny filaminana sy ny kalitaon'ny haavo ho an'ny Chef Automate izay efa nandrasana tamin'ny AWS soa aman-tsara. Raha tsy mifanaraka amin'ny faharoa-izay manombantombana ny kalitao tsy mendrika ny fitaovanao manokana na ny fahombiazan'ny rafitrao, azonao omena AWS ny fahafahana hanara-maso ny Chef Automate ho anao amin'ny 24x7x365 vahaolana sy mandoa vola-tahaka-ianao-handeha. Aoka ny AWS hiatrika ny fanamafisanao, ny famerenana indray ary ny famerenana fandaharana. Izany dia manome alalana anao sy ny vondrona anao hampiasa vola tsy miankina amin'ny Chef Automate sy ny fotoana fanampiny mifantoka amin'ny fanoherana ny mpifanandrina.
AWS OpsNy asa ho an'ny Chef Automate dia tombony ho an'ny AWS. Tahaka ny fitantanan-draharaha nividiananao tamin'ny AWS, izy ireo dia mpandranto ny rakitsoratra. AWS manome hery, mifampiraharaha amin'ny fitantanana, ary ny tanjonao hifandray amin'ny ampahany lehibe amin'ny ahiahinao. Chef Software Inc. dia mpomba ny AWS ary manohana ny fampiasana ny zavatra entinay. Miaraka amin'ny AWS OpsWorks ho an'ny Chef Automate, dia manitatra ny fifandraisana misy anao amin'izao fotoana izao amin'ny Amazon Web Services. Ny fampiasana an'io fitantanan-draharaha io dia miseho amin'ny antsipiriany ao amin'ny AWS anao. Mahazo ny hery rehetra ananan'ny Chef ianao, manohana anao amin'ny mpamatsy rahona izay fantatrao sy azo itokisana. Ny ampahany lehibe amin'ny fampiasanao chef dia nampidirina ho tsotra, mora ampiasaina ary mora hita faritra. Tahaka ny sasantsasany fototra hafa amin'ny petra-taratasy fangatahana fampiharana, dia tapa-taratasy fanamafisana orinasa iray nampitain'ny AWS.
Ity fanolorana vaovao ity dia lalana tsotra ho an'ny mpanjifan'ny AWS hanandrana ny teti-bola ao amin'ny orinasa Chef: Chef Automate. Miaraka amin'ny 10 maimaimpoana maimaim-poana mandritra ny herintaona, fomba fanao mahazatra amin'ny ankapobeny ny manomboka haingana ary mahatsikaritra ny fomba Chef Automate dia manome anao ny fahitana, ny tsy fitoviana, ary ny fizotry ny asa arak'asa rehefa miatrika ny fanovana rehetra momba ny fandaharam-pampianarana. Miaraka amin'ny AWS OpsWorks ho an'ny Chef Automate, ianao koa dia vonona ny hampiasa ny ankamaroan'ny fitaovana open open izay hita matetika ao amin'ny rafitra biolojika Chef, ao anatin'izany ny cookbooks Supermarket, fitsaboana, InSpec, Habitat, ary (mazava ho azy) Chef mba hiatrehana ny fiainanao AWS framework ary fampiharana. Manana ny fahafahana handresy ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny zava-manan'aina rehetra ianao ary manomboka amin'ny fisaritahan'ny trondro iray.
Tsy dia haingana loatra na tsy dia sarotra ny manomboka amin'ny Chef Automate; Afaka atomboka izao ny fampiononana AWS toy ny fitantanan-draharahanao hafa.
12 Tricks mba hitantana Multiple Cloud Services
9 Best Training Courses amin'ny Google Cloud Platform